Xulista 10 fiilooyin wanaagsan ee Saameynta Kadib (I) | Abuurista khadka tooska ah
Adobe After Effects waa barnaamij aad u awood badan oo loogu talagalay sameynta fiidiyowyo 3D ah, saameyn gaar ah, iyo animations. Laakiin runtu waxay tahay in aaladaha iyo xulashooyinka ay ka keenayso warshadda mararka qaarkood waan ka gaabi karnaa. Gaar ahaan haddii aan ka shaqeyno halabuurro aad u adag oo aan raadineyno natiijo xirfad leh. Taasi waa sababta aan kuugu keenay xul ah 10 waxyaabaha muhiimka ah in lala shaqeeyo barnaamijkan:
Cosmo: Had iyo jeer waxaa la yiraahdaa ma jiro wax beddeli kara iftiinka wanaagsan iyo qurxinta xirfadeed, laakiin Cosmo waxay umuuqataa inay ku jees jeesayso soo jeedintaas. Iyada oo aan la madoobaynin goobta, waxay jilcinaysaa midabka maqaarka, waxay baabiinaysaa cilladaha iyo khadadka ganaaxa iyadoo ilkaha iyo indhaha diiradda la saarayo. Heerka jilicsanaanta waa la hagaajin karaa iyadoo lagu saleynayo dookhyadayada waxayna na siin kartaa natiijooyin yaab leh.
Koodhadhka khaaska ah: Waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna magaca dheer, shaqadiisuna waa abuurista nooc kasta oo jajab ah (iftiin, xitaa baraf ama roob). Naqshadeedu waxay na siinaysaa guud ahaan xakamaynta qaybaha: qaabka, cabbirka, midabka iyo qaabka isku dhafka. Tani waa ikhtiyaarka ugu dhaqsaha badan uguna wax ku oolka badan ee loogu talagalay animation nidaam walxaha adag. Waxay bixisaa fursado aan dhammaad lahayn.
Primatte Keyer: Plugin loogu talagalay in laga saaro asalka midabada leh (saameynta muhiimka ah ee chroma). Ku tirtirka aagga midabka ee Adobe After Effects oo leh saldhigyada aasaasiga ah ee ay keento waxay noqon kartaa hawl adag laakiin qalabkan wuxuu noqon doonaa mid si aad ah u fudud. Waa wax aad u fudud oo bixiya natiijooyin yaab leh. Waxaa la ogyahay in marka la adeegsanayo saameynta chroma, geesaha aan dhameystirneyn iyo dhibaatooyinka cilladooda ay muuqan karaan. Sida ay qiimaha, ma aha si sax ah raqiis ah, in kasta oo loogu talagalay dadka isticmaala ka shaqeeya saamaynta this ku salaysan-joogto ah, waxaa loo qaadan karaa aalad muhiim ah.
Nalalka indhaha: Muddo sanado ah, Knoll Light Factory wuxuu ahaa hogaamiyaha aan muranka ka taagneyn tiknoolajiyada muraayadda muraayadaha, laakiin soo ifbixinta ololka qiimaha jaban ayaa dhaliyay kacaan. Qeyb ka mid ah rafcaanka Xakamaynta Iftiinka waa isku xirnaanta cajiibka ah: cad, muuqaal, iyo fududahay in la isticmaalo. Haddii aad u baahato horay u sii deyn, waxaa jira ton iyaga ka mid ah, oo haddii aad rabto inaad wax ka beddesho ama aad wax ka abuurto xoq, waa sahlan tahay. Waxaan si buuxda ugula shaqeyn karnaa halabuurrada '3D', isku-dhex-duubisteeda muuqaallada ayaa ka fudud kana dhakhso badan wixii kale oo dhameystir ah.
Denoiser II: Miirayaasha dhimista sawaxanka marar dhif ah ayey u shaqeeyaan sida aan u baahan nahay, laakiin Denoiser II wuxuu saaraa firida laga helay xabbadaha iftiinka yar si dhib la’aan ah. Xaalado badan way shaqeyn kartaa iyada oo aan la hagaajin, si otomaatig ah sida ugu dhakhsaha badan ee loo isticmaalo, laakiin sanqadha xad dhaafka ah waxaan ku ciyaari karnaa sariirta. Waxaan heli doonnaa sawirro fiiqan, hadhuudhkii ayaa gebi ahaanba laga saari doonaa, iyada oo aan saameyn ku yeelanayn dareenka guud ee faahfaahinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Xulashada 10 fiilooyin wanaagsan oo loogu talagalay Saameynta Kadib (I)